Google Adsense Ugbu a ego maka nri m | Martech Zone
Monday, August 25, 2008 Mọnde, Jenụwarị 7, 2013 Douglas Karr
Ruo oge ụfọdụ, agbapụrụ m mgbasa ozi mgbasa ozi na ndepụta m site na iji PostPost ngwa mgbakwunye m mepụtara maka WordPress na Òtù Ụlọ Ọrụ mgbasa ozi. Ọ bụghị n'ezie isi iyi nke ọ bụla dị mkpa revenue, ezie, ma eleghị anya, ole na ole dollar a ọnwa.
Izu a, etinyere m na Google Adsense iji gbanwee ndepụta m site na Feedburner gaa Google. Usoro ime nke a ka bụ akwụkwọ ntuziaka, mana atụla egwu, ị gaghị atụfu otu onye debanyere aha na usoro ahụ. Adreesị abụọ ahụ na-aga n'ihu na-ebipụta ndepụta ahụ, mana itinye nri na Google nwere uru ego ebe ọ ga - enye gị ohere ịnweta Google Adsense maka faili ntanetịime.
Nanị nbanye na akaụntụ Adsense gị ma soro ntuziaka iji jiri aka gị nyefee ndepụta gị maka ntụgharị. O were ihe dị ka otu izu tupu mụ agbanwee. Google na-ekwe nkwa na nke a ga-abụ usoro akpaghị aka n'ọdịnihu.
Ma, ọ zughi oke, ọ bụ ezie! Lelee mgbasa ozi dị n'elu site na nzukọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị egwu nke jikọtara ya na ndetu m banyere Joe Biden. Ihe edere aha ya bụ n'ezie ihe na-atụ ụjọ na akụkọ Biden nke afọ 40 nke ịtụ vootu na nnukwu nwanne nwoke ma hapụ obere nwa ahụ ka ọ kwụwa.
Anaghị m atụ anya oke ego ha ga enweta na Adsense na ndepụta. Ọtụtụ ndị folks na-akpọ mmemme ahụ Webmaster Ọdịmma.
Tags: ndepụtaGoogle AdSensemonetization
Aug 25, 2008 na 10:18 PM
N'ezie Douglas Enwere m mgbasa ozi RSS maka ihe dị ka otu izu ugbu a na ụbọchị ụfọdụ enwere m ego ka mma n'ebe ahụ karịa ka m na-eme site na blọọgụ AdSense blog. Amaghị nke ọma na nke ahụ ga - agafe oge mana ọ dị mkpa ugbu a.
Aug 26, 2008 na 7: 35 AM
Nke ahụ dị mma ịnụ! Ana m atụ anya ịhụ ka ọ na-apụ. Nyaahụ ọ bụ $ 0.01, hehe.
Aug 26, 2008 na 6: 43 AM
M na-akpọ ya webmaster ọdịmma n'ihi na ọ bụ a "handout" nnoo na ọ bụghị n'ihi na ọ dịghị eme ezigbo ego - anyị rev bụ 5 ọgụgụ a ọnwa site na ya.